कैसीनो बोनस कसरी काम गर्दछ?
जनवरी 14, 2019	समाचार
वर्तमानमा, बोनसहरूलाई वेब साइटमा आकर्षित गर्न र नयाँ खेलाडीहरू राख्नको लागि एक महत्वपूर्ण उपकरण बनिसकेको छ। तर यो मतलब छैन कि अन्य तरिकाहरु आकर्षण काम नगर्नुहोस्। आज हामी बोनस बारेमा कुरा गरिरहेका छौं। धेरै व्यक्तिहरूले सोधे कि बोनसहरू एक बुलबुला योजना हो, तर वास्तवमा प्राय: जुआको पक्षमा काम गर्छन्। मुद्दाको बारेमा अझ बढी जान्न हाम्रो म्यानुअल पढ्नुहोस्।
बोनसले कसरी काम गर्छ?
खाता निर्माण वा जम्मा गर्ने को लागी बोनसहरू एक प्रकारको पुरस्कार हुन्। बोनस प्रायः एक क्रेडिटको रूपमा दिइएको छ जुन तपाइँ कुनै खेल खेल्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, र चाँडै तपाईले विभिन्न आवश्यकताहरू पूरा गर्नुभएको छ भने, बोनस तपाईंको खातामा लगाइनेछ। त्यहाँ नि: शुल्क स्पिनहरू र नगद पछाडि अन्य बोनसहरूको लोकप्रिय प्रकारहरू छन्। यी बोनसहरूको लक्ष्य भनेको जुआलाई दोस्रो मौका दिइनेछ। तपाइँ यी बोनसहरू प्रयोग गरेर पनि खेल जारी राख्न सक्नुहुनेछ जुन पनि बिना डिपेसन बिना। धेरै जटिल वेगर बावजूद यो बोनसहरू पाएका छन्, अझै पनि वास्तविक पैसा मार्न को लागी संभावनाहरू छन्।
मुख्य प्रकार बोनस
जम्मा बोनस - यो एक प्रकारको क्रेडिट हो जुन जम्मा राशिमा निर्भर गर्दछ। प्रायजसो, जुआले जम्मा राशिबाट 50% वा 100% प्राप्त गर्दछ, तर कहिले काहीं एक क्यासिनोले 200% र यहाँ 300% दिन्छ। तर सीमाहरूको बारेमा सम्झनुहोस्! एक क्यासिनोको अवस्थाले प्राय: निम्न कुरा गर्दछ: "150% 150 यूरोको जम्माको लागि बोनसहरूमा"। या त बिर्सनु पर्छ भनेर बिर्सनु हुँदैन।
कुनै जम्मा बोनस छैन- यो एक धेरै लोकप्रिय बोनस हो, विशेष गरी भनिन्छ बोनस शिकारीहरू (जो बोनसका लागि शिकार गर्ने व्यक्तिहरू), जुन कुनै पनि जोखिम वा जम्मा बिना जम्मा गर्न चाहन्छन्। यस्तो बोनस प्राप्त गर्न यो सरल छ। तपाइँलाई केवल एक खाता खाता खोल्न आवश्यक छ। जम्मा गर्न आवश्यक छैन। बोनस रकमले 10 बाट 20 यूरो सम्म भिन्न हुन्छ, तर वेयर आवश्यकताहरू धेरै जटिल छन्।
फ्री spins - यस अवस्थामा, एक जुआले पैसा कमाउँदैन, तर लोकप्रिय स्लटहरूमा निःशुल्क स्पिन प्राप्त गर्दछ। यदि जुआले जित्छ भने, लाभ बोनस खातामा अवतरण गरिनेछ। यसलाई खेल खातामा स्थानान्तरण गर्न र पछि यसलाई वास्तविक रकममा बदल्नुहोस्, अतिरिक्त शर्तहरू पूरा गर्न आवश्यक छ।
नगद फिर्ता बोनस - यो एक भाग को एक भुक्तानी हो हराएको पैसा बोनसको रूपमा। चुकौती राशि कैसीनोमा निर्भर गर्दछ।
वफादार कार्यक्रम - हरेक कैसीनो चाँडै लामो समयसम्म यो खेलाडीहरू राख्नको लागि रुचि राख्दछ। आफ्नो पक्ष पाउने क्रममा, यो विशेष कार्यक्रममा भाग लिन प्रस्ताव गर्दछ। प्रोग्राम फाइदाको बारेमा राय बनाउनको लागि यो गाह्रो छ। अधिकतर अवस्थामा, यो वफादार अंक, अनन्य खेलहरूमा पहुँच, वा ज्याकपोटको लागि प्रतिस्पर्धामा सहभागिता प्रदान गर्दछ।
बोनसको सामान्य अवस्था
बोनसहरू वास्तविक पैसामा मात्र बदल्न सम्भव छ भने तपाइँ धेरै आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुन्छ। तपाईंले बोनस स्वीकार गर्नु अघि, यसको प्रयोगको शर्तहरू सावधानीपूर्वक पढ्नुहोस्। यदि तपाईं सँग कम्तीमा एक वस्तुको बारेमा कुनै संदेह छ भने, ग्राहक सेवाका अपरेटरहरूको प्रश्न सोध्नुहोस्। कैसीनोको बोनस अवस्थाबाट धेरै रोचक वस्तुहरू निम्नानुसार छन्:
क्यासिनो प्रायः सख्त सीमाहरू सेट गर्दछन्। उदाहरणको लागि, प्रत्येक आईपी ठेगाना, ई-मेल ठेगाना, र बैंक कार्डको एक खेल खाता। यसको अर्थ छ कि जुआमा दुई खाताहरू हुन सक्दैनन्। यदि यो शर्त तपाईंको लागि अत्यन्तै सख्त देखिन्छ भने, क्यासिनोलाई धेरै खाता बनाउन धोका दिने प्रयास नगर्नुहोस्। हुनसक्छ, उनीहरूले तपाईंलाई बोनस दिनेछन्, तर तपाईंको सबै जम्मा विनाश रद्द गरिनेछ पछि।
जब तपाईं आफ्नो खाता दर्ता गर्नुहुन्छ, मात्र विश्वसनीय जानकारी संकेत गर्नुहोस्; अन्यथा, सम्भावना छ कि तपाईं आफ्नो पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। कहिलेकाँही, कैसीनोहरू तपाईंको पहिचान पुष्टि गर्न सोध्छन्। यस आवश्यकतालाई पूरा गर्न तपाईंले आफ्नो कागजातको स्क्यान पठाउन आवश्यक छ (आईडी, चालकको इजाजत पत्र, वा पासपोर्ट)।
तपाईं तुरुन्तै बोनस फिर्ता गर्न सक्नुहुन्न। भोज आवश्यकताहरूको अनुसार, तपाइँले एक पटक भन्दा बढी प्राप्त बोनस चार्ज गर्न आवश्यक छ, र यसको मतलब छ कि तपाईले आफ्नो बोनस धेरै चोटि बढाउनु पर्छ। उदाहरणका लागि, तपाईंलाई 100 यूरोमा बोनस दिइएको छ, वेयर आवश्यकताहरू 30 पटक छन्, जसको अर्थ तपाईंलाई 3000 यूरो शर्त आवश्यक छ। यदि तपाइँ स्लॉट खेल्नुहुन्छ र 10 यूरो शर्त गर्नुहुन्छ, यसको मतलब यो हो कि तपाईले 300 पटक खेल्न आवश्यक छ (तपाईलाई जितेर तपाइँ जित्नु भएन वा हराउनु हुन्छ)। धेरै जुआहरू यी सर्तहरू पूरा गर्न र सबै बोनस गुमाउन सक्दैनन्।
क्यासिनो प्रायः केही देशहरूमा जुआबलहरूको लागि बोनस सीमित गर्दछ। यो वस्तु बोनस सर्तहरूमा जाँच गर्न निश्चित हुनुहोस्।
बोनस प्राप्त गर्न तपाईले जम्मा गरेको रकम प्रमोशन कोड प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ।
तपाईंलाई बोनस बारेमा थाहा छ?
केवल कैसीनोहरूमा एक साथ प्ले गर्नुहोस् राम्रो प्रतिष्ठा। क्यासिनो प्रतिष्ठाको बारेमा जानकारी पाउनको लागि, वेब साइट Askgamblers.com वा "google" इन्टरनेटको भ्रमण गर्नुहोस्। यदि तपाइँले जूवा खेलाडीहरूबाट केहि वैध गुनासोहरू फेला पार्नुभयो भने, यस क्यासिनोमा खाता सिर्जना नगर्नुहोला यदि यसको बोनस तपाईंलाई एकदम आकर्षक लाग्यो।
थुप्रै क्यासिनो उनीहरूको अवस्थामा लेख्छन्: "क्यासिनोले बोनसहरू परिवर्तन गर्न, रद्द गर्न, र रद्द गर्न अधिकार दिन्छ"। बोनसहरू क्यासिनोद्वारा दिइएका छन्, र तिनीहरूसँग उपयुक्त फिट नियमहरू गर्ने अधिकार छ। होस् गर। यदि तपाईं आफ्नो बोनस प्रयोग गरेर पैसाको ठूलो रकम जित्नुहुन्छ भने, उनीहरूले तपाईंलाई ट्रिकरीको आरोप लगाउँछन् र तपाइँको winnings रद्द गर्न सक्छन्। र यदि कैसीनो यो कुरा गर्न को लागी निर्णय गर्दछ, हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, यो हुनेछ। निस्सन्देह, तपाईं विभिन्न क्यासिनोहरूमा उजुरी छोड्न चाहानुहुन्छ कि कैसीनो यसको निर्णय परिवर्तन गर्नेछ, तर, दुर्भाग्यवश, यो बेकार हुनेछ।
बोनस एक्स्प्रेस टोलीले पारदर्शी र बुझ्न योग्य अवस्थाहरूसँग क्यासिनोलाई उच्च सम्मान गर्दछ। यो ठाउँहरू हाम्रो सूचीमा चिन्ह लगाइएका छन् "लेबल सर्तहरू"।
सम्बन्धित क्यासिनो समाचार:
कुवेत शहरहरूमा क्यासिनो बोनस
प्लेब्या बिननिजको बारेमा मिथकहरू
कुन अनलाइन पकाउने मशीनहरू वास्तवमा सबैभन्दा बढी तिर्नुहुन्छ?
चेरीले ज्याकेट पोष्ट
उत्तम फास्ट पेड कैसीनो खेलहरू
शतरंज बक्सिंग र अन्य विचित्र खेलहरु
विकास गेमि। - एक परिचय
क्यासिनो फ्री स्पिनहरू
कैसीनो बोनस कसरी काम गर्दछ? अपडेट गरिएको: जनवरी 14, 2019 लेखक: Damon
0.0.1 बोनसले कसरी काम गर्छ?
0.0.2 मुख्य प्रकार बोनस
0.0.3 बोनसको सामान्य अवस्था
0.0.4 तपाईंलाई बोनस बारेमा थाहा छ?
1 सम्बन्धित क्यासिनो समाचार:
1.0.1 कुवेत शहरहरूमा क्यासिनो बोनस
1.0.2 त्यो विजेता
1.0.3 प्लेब्या बिननिजको बारेमा मिथकहरू
1.0.4 कुन अनलाइन पकाउने मशीनहरू वास्तवमा सबैभन्दा बढी तिर्नुहुन्छ?
1.0.5 चेरीले ज्याकेट पोष्ट
1.0.6 उत्तम फास्ट पेड कैसीनो खेलहरू
1.0.7 शतरंज बक्सिंग र अन्य विचित्र खेलहरु
1.0.8 विकास गेमि। - एक परिचय
1.0.9 eSports वर्णित
1.0.10 क्यासिनो फ्री स्पिनहरू
कसरी क्यासिनो बोनस ...